Owuwe ihe ubi yabasị na China fọrọ nke nta ka ọ gafee - Potato System Magazine
Owuwe ihe ubi yabasị na China agwụla
в Nchịkọta, Akụkọ ụwa, News
Owuwe ihe ubi yabasị na Shandong na Henan na-agwụkarị n'etiti ọnwa June, mana n'afọ a ọ ga-aga n'ihu ruo ngwụcha ọnwa, ka akụkọ na-akọ. Akụkọ nduku Portal. N'oge dị ugbu a, mkpokọta ihe ọkụkụ nke yabasị na-acha uhie uhie abawanyela, ebe nke yabasị edo edo ebelatala. Otu onye na-ebupụ na mpaghara Shandong kwuru n'oge na-adịbeghị anya banyere ọnọdụ na mpaghara mmepụta yabasị na ahịa mbupụ.
“Azụ ahịa yabasị dị n'ime ụlọ juru eju ka ebufe sitere na mpaghara mmepụta dị iche iche na-abịa n'otu oge. Ogo na àgwà eyịm dị iche iche. Ahịa ahụ na-ekpo ọkụ. Ọnụ ego a na-azụta yabasị 8 cm dị ihe dị ka 0,75-0,80 yuan [0,11-0,12 USD] kwa kilogram 0,5, ọnụ ahịa yabasị uhie bụ 0,35-0,40 yuan [0,05. 0,06-0,5 USD] kwa XNUMX n'arọ.
"Owuwe ihe ubi na Gansu kwesịrị ịkwụsị na njedebe nke June. Ụta a ga-emepụta asọmpi siri ike maka ngwaahịa na-abịa site na nchekwa. Tụkwasị na nke ahụ, mkpokọta ihe ọkụkụ nke yabasị na-acha odo odo, nke bụ isi ngwaahịa maka ahịa mbupụ, ebelatala ntakịrị. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị ahịa na-enwe nchekwube banyere ọnọdụ ahịa nke eyịm edo edo, nnukwu ụgwọ mbupu na-akpata nnukwu ihe mgbochi na mbupụ yabasị na nke a na-eme ka ndị ahịa ghara ịzụrụ ihe, "onye na-ebupụ yabasị kọwara.
Ọnụ ego a na-akwụ maka yabasị peeled sitere na Qingdao dị ihe dị ka $650 / tonne, dị ala karịa ọnwa ole na ole gara aga. "Ọrịa dị ala nke yabasị na-eme ka ọnọdụ ha dị n'ịsọ asọmpi na ahịa, ebe ọ bụ na a kwụsịtụrụ mbupụ yabasị ihe dị ka otu afọ, anyị enweela ajụjụ ole na ole sitere n'aka ndị ahịa si mba ofesi n'ime izu ole na ole gara aga," onye na-ebupụ yabasị kwuru.
“Ego eyịm edo edo dị obere, ọnụ ahịa mbupu na-abawanye kemgbe afọ gara aga, ọtụtụ ndị na-ebupụ yabasị akwụsịla ibupụ yabasị. "Anyị ka na-ebuga obere yabasị peeled na England na ahịa ndị ọzọ dị na Europe, mana nke ahụ kwụsịrị n'ihi na ọnụ ahịa mbupu dị oke elu," onye na-ebupụ yabasị kwuru. "Ụgwọ mbupu ugbu a site na Qingdao gaa Europe bụ 8-500 kwa akpa. Ọ bụ ezie na ọnụ ahịa ụgbọ njem na-ada, ha ka dị oke elu nke na-eme ka mbupụ na-erite uru.”
isi: Akụkọ Nduku
Tags: Chinayabasị uhieahịa yabasị